June 22, 2021 - Khitalin Media
ဆံပင်ကို သဘာဝအတိုင်း ဖြောင့်စင်းစေမယ့် ပေါင်းတင်နည်း
June 22, 2021 by Khitalin Media
သဘာဝအတိုင်း ဆံပင်ဖြောင့်စင်းစင်းလေးကို မကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေး ဘယ်မှာရှိမှာလဲ။ ဒါ့ကြောင့်လဲ အလှပြင်ဆိုင်တွေမှာ ဆံပင်ဖြောင့်တာ ခေတ်စားတာပေါ့နော်။ ဆံပင်ဖြောင့်ဖို့အတွက် ဓါတုပစ္စည်တွေသုံးတာဟာ ဆံသားပျက်ဆီးစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သဘာဝနည်းလမ်းတစ်ခုကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်း ငှက်ပျောသီးမှည့် ၂ လုံး ပျားရည် စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း ဒိန်ချဉ် စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း သံလွင်ဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း ကြက်ဥအကာ ၁ လုံး ပြင်ဆင်ခြင်း ငှက်ပျောသီးကိုအခွံနွှာပြီး ပြဲသွားအောင် ဖိလိုက်ပါ။ ကြိတ်လိုက်လည်းရပါတယ်။ ပြီးရင် ပျားရည် ဒိန်ချဉ်နဲ့ သံလွင်ဆီထည့်ပါ။ ပြီးရင် ကြက်ဥအကာထည့်ပါ။ သေချာမွှေပေးပါ။ နှံ့သွားပြီဆိုရင် သုံးလို့ရပါပြီ။ ပြုလုပ်နည်း ဆံပင်အဖျားကနေ အရင်းထိ သေချာလိမ်းပေးပြီး Shower Cap (သို့) … Read more
လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အမ်ားဆုံးျဖစ္ေလ့ ရွိတဲ့ေဝဒနာ ကိုေျပာပါဆိုရင္ ေနာက္ေက်ာဘက္နာက်င္ျခင္း ပါပဲ။ ခါးနာၾက တယ္။ ေက်ာနာၾကတယ္ စတဲ့ေဝဒနာေတြ ခံစားရတဲ့ အခါ လူကလည္း သက္ေတာင့္ သက္သာ မရွိပဲ ပင္ပန္း ပါတယ္။ ဒီလိုေဝဒနာေတြ ခံစား လာရၿပီ ဆိုရင္ သင့္အေနနဲ႔ ဒီနည္းလမ္းေကာင္းေတြ ထဲက တစ္နည္းနည္းကို စမ္းသပ္ၾကည့္ သင့္ပါတယ္။ ဘယ္လို နည္းလမ္းေတြက ခါးနာေက်ာနာျခင္းကိုသက္သာေစ လဲဆိုရင္… *ေက်ာ႐ိုးကိုအနားေပးျခင္း ခါးနာေက်ာနာျခင္းကို ငါးမိနစ္အတြင္းသက္သာသြားေစမယ့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား အိမ္မွာရွိေနတဲ့ အခ်ိန္ဆို ဒီနည္းေလးကို သုံးၾကည့္သင့္ ပါတယ္။ ပထမဆုံး ၾကမ္းျပင္မွာထိုင္လိုက္ပါ။ ျပီးရင္ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္း ကိုေျဖာင့္တန္းစြာ ထားလိုက္ ပါ။ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ ၁၀ စင္တီမီတာေလာက္ျခား ထားပါ။ ၿပီးရင္ ေစာင္တစ္ထည္ကို ထူထူေလးျဖစ္ေအာင္လိပ္ၿပီး ပုံထဲမွာျပထားသလို … Read more
မည်သည့် အမာရွတ်မဆို အမြန်ပျောက်ကင်းစေမယ့် နည်းလမ်းလေး
အေရျပားေပၚက မည့္သည့္အမာ႐ြတ္မ်ိဳးကိုမဆို အျမန္ေပ်ာက္ကင္းလိုလွ်င္ဒါေလး ဖတ္ၾကည့္ပါအမာ႐ြတ္ေတြ ေပ်ာက္ခ်င္ရင္ ပ်ားရည္နဲ႔ မုန႔္ဖုတ္ဆိုဒါကိုသုံးပါ။ ပရိသတ္ေတြကို ေျပာျပခ်င္တာက အမာ႐ြတ္ေတြ ေပ်ာက္ေစမယ့္ နည္းလမ္းေလးတစ္ခုပါ။ လိုအပ္တာကလည္း ပ်ားရည္စစ္စစ္နဲ႔ မုန႔္ဖုန္ဆိုဒါ ႏွစ္မ်ိဳးတည္းပါပဲ။ ပထဆုံးအေနနဲ႔ အမာ႐ြတ္ေနရာကို သန႔္စင္ထားေပးဖို႔ေတာ့ လိုပါမယ္။မုန႔္ဖုတ္ဆိုဒါနဲ႔ ပ်ားရည္ကို ဆတူေရာၿပီး ေမႊေပးပါ။ ရလာတဲ့အႏွစ္ကို အမာ႐ြတ္ေပၚမွာ လိမ္းေပးထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပ်ားရည္၊မုန႔္ဖုတ္ဆိုဒါ သုတ္လိမ္းထားတဲ့ အမာ႐ြတ္ေနရာေပၚကို ေရေႏြးဝတ္ေလး ကပ္ေပးထားပါဦး။မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ ၾကာရင္ ျပန္ခြာလိုက္လို႔ရပါၿပီ။ ေစာနက သုတ္လိမ္းထားတဲ့ ပ်ားရည္ေတြကို ေရေႏြးေႏြးနဲ႔ ျပန္လည္သန႔္စင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပတ္ကို ၂ ႀကိမ္ေလာက္ လုပ္သြားေပးရင္ တစ္လအတြင္းမွာ အမာ႐ြတ္က သိသိသာသာ ေလ်ာ့သြားပါလိမ့္မယ္။ (((( ဒီ Post ေလးက အသုံးဝင္တယ္ ဆိုရင္Share … Read more
ဒီမေးခွန်းတွေထဲက ၆ ခုလောက်ဖြေနိုင်ရင် သင်က လှည့်စားရ ခက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုတာ လက်ခံလိုက်ပြီနော် ဖြေကြည့်လိုက်တော့
ဒီမေးခွန်းတွေထဲက ၆ ခုလောက်ဖြေနိုင်ရင် သင်က လှည့်စားရ ခက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုတာ လက်ခံလိုက်ပြီနော် ဖြေကြည့်လိုက်တော့ ဒီမေးခွန်းတွေထဲက ၆ ခုလောက်ဖြေနိုင်ရင် သင်က လှည့်စားရခက်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါ (၁) ဘိုဘို့အဖေမှာ ကလေး ၄ ယောက်ရှိတယ်။ အဲ့ဒီကလေး ၄ ယောက်က မိုမိုရယ်၊ မွန်မွန်ရယ်၊ မီမီရယ် ဆိုရင်စတုတ္ထကလေးက ဘယ်သူလဲ? (၂) ဦးမောင်ရဲ့ဒေါင်းက ဦးလှရဲ့ခြံထဲမှာ ဥသွားဥတယ်ဆို အဲ့ဒီဥတွေကို ဘယ်သူပိုင်သလဲ? (၃) လျှပ်စစ်ရထားက မြောက်အရပ်ကို ၁ နာရီမှာ ၁၀၀ မိုင် ခုတ်မောင်းနေပါတယ်။ လေက အရှေ့အရပ်ကို ၁ နာရီမှာ ၁၀ မိုင်တိုက်နေတယ်ဆို ရထားရဲ့မီးခိုးတွေက ဘယ်အရပ်ကိုထွက်မှာလဲ? (၄) ကုန်တင်ကားမောင်းတဲ့လူက တစ်လမ်းမောင်း ယာဉ်ကြောကို လမ်းပြောင်းပြန်သွားမိပေမဲ့ အဲ့မှာရှိတဲ့ ရဲတွေက … Read more
ဂျပန်အဆိုတော် Suwa Junko ပြန်လည် သီဆိုထားတဲ့ “ခွန်အားဖြည့်မိငယ်” (ရုပ်/သံ)
ဂျပန်အဆိုတော် Suwa Junko ပြန်လည် သီဆိုထားတဲ့ “ခွန်အားဖြည့်မိငယ်” (ရုပ်/သံ) ယနေ့၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အသက် ၇၆ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ ဂျပန်နိုင်ငံက နာမည်ကြီး အဆိုတော် Suwa Junko က အဆိုတော် ခင်မောင်တိုးရဲ့ “ခွန်အားဖြည့်မိငယ်”ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ပြန်လည် သီဆိုကာ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် အားပေးခဲ့ပါတယ်။ “ဒီအချိန်မှာ ကျမ လုပ်နိုင်တဲ့အရာကို စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါ ကျမတို့ ဂျပန်လူမျိုးတွေကို မြန်မာပြည်ရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေကို နားလည်စေဖို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းပဲလို့ ယူဆမိပါတယ်” “အခုအကြိမ်ကတော့ ကျမ နေထိုင်တဲ့ တိုချိဂိခရိုင်၊ အိုတာဝါရမြို့က မြို့သူမြို့သားတွေဆီကို မြန်မာပြည်အကြောင်း ရှင်းပြပြီး သူတို့ရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့ … Read more
မိုးဦးကောင်းမယ် ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း မိုးမတိတ်နိုင်ပါဘူးနော်။ဒါကြောင့် တောင်သူတွေ ၊ အလုပ်သမားတွေ၊ လက်လုပ်လက်စားသမားတွေ အနေနဲ့ သိရှိပြီး အမိုးအကာ ထီးများ ယူသွားနိုင်အောင် ကြိုသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ မိုးရွာနိုင်တဲ့ မြို့နယ်များကတော့နေပြည်တော် လယ်ဝေး ဧလာ ရေနီ မြို့လှ သာဂရ ဆွာ ရေတာရှည်ကျွန်းကုန်း တောင်ငူ သံတောင်ကြီး ထန်းတပင် အုတ်တွင်း ကျွဲပွဲ ညောင်ခြေတောက်ဇေယျဝတီ ဖြူး ညောင်ပင်သာ ကျောက်တံခါး ကျောက်ကြီး ဖြူး ပိန်းဇလုပ် ဖ တို ရွှေကျင် မဒေါက်ညောင်လေးပင် ပြွန်တံဆာ ဒိုက်ဦး ကျိုက်ဇကော ပျဉ်ပုံကြီး ဝမ်းဘဲအင်း ဘုရားလေး ဘုရားကြီး ပဲခူး သနပ်ပင်သက္ကလ ခရမ်း သုံးခွ သံလျှင် ရန်ကုန် ကျောက်တန်း တံတားမြို့ ပြည် ပေါက်ခေါင်း … Read more